बिबिसीले विश्वका १०० प्रभावशाली महिलाको सूचिमा राखेपछी सपनाले गरिन प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो प्रश्न ? (भिडियो हेर्नुहोस) – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Video/बिबिसीले विश्वका १०० प्रभावशाली महिलाको सूचिमा राखेपछी सपनाले गरिन प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो प्रश्न ? (भिडियो हेर्नुहोस)
बेवारिसे लासहरुको अन्तिम दा,हासंस्कार गरेकै कारण एउटी साहासी नारीको रुपमा सपना रोका मगरलाई बिबिसीले विश्वका १०० प्रभावशाली महिलाको सूचिमा राखेपछि अहिले उनी चर्चाको शिखरमा छिन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
उनलाई अहिले समाजिक सन्जालमा धेरै धेरैले खोजी रहेका छन उनको कामलाई सबैले खुलेर तारिफ गरी रहेका छन । म्याग्दीकी १८ वर्षीया सपना रोका मगर पनि मृ,त शरीरलाई दा,गबत्ती दिन्छिन् तर उनको अवस्था भने अरुको भन्दा फरक छ ।
वे,वारिसे अवस्थामा भेटिएका श,वहरुलाई दा,गबत्ती दिएर अन्तिम संस्कार गर्छिन् सपना,अर्थात कैले पनि मुक्ती नपाउने आत्मालाई मुक्ती दिने महान काम गर्छिन । उनको कर्म बुवा या गुरु बिनय जङ बस्नेत हुन उनले ७ बर्ष देखी यो काम गर्दै आएक छ्न तर आज सम्म उनको यो आवाज सरकारले सुनेको छैन आज सम्म सबै आफ्नै खर्छ मा बे,बारिसेलाई मु,क्ती दिइरहेका छन । भिडियो हेर्नुहोस